बुहारी सिर्जना त्रिपाठीलाई प्रचण्ड निवासमा प्रवेश निषेध! – NepalajaMedia
Prevभारतको प्रस्ताव : सीमा विवाद समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाऔं
Nextकन्याम घुमेर फर्किदै गर्दा मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुईको मृत्यु!
गर्भवती महिलाले नगर्नुहोस् यो सानो गल्ती, नत्र बच्च अपांग जन्मिने खतरा !
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (7172)
नेपालमा पनि यति गते बाट टिकटक बन्द हुदै (3290)
यी हुन् कलेजो बिग्रिएको थाहा पाउने ५ संकेत ! (1777)
Breaking News: अचानक भर्खरदेखी काठमाडौंका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (1490)
नेपालमा पहिलोपटक एकै दिन कोरोनाले छ जनाको मृत्यु (1266)
आ’फ्नै जीवनमा आधारित यति मिठो गीत रेकर्ड ग;राए अर्जुनले ..( भिडियो हेर्नुहोस् ) (1218)
काठमाडौँको एक निजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई १२ दिन राखेको बिल आयो २६ लाख तर बाचेन बिरामी, पैसा दिएपछि मात्रै सेनाले शव लैजान पायो (1147)
मलेशियामा सुरक्षा गार्ड कुट्ने सुपरभाइजरद्वारा आत्मसमर्पण, कुट्ने कुटाइ खाने दुवै नेपाली (1123)
फाल्गुन २२ गते शनिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल